အမေ – The Only Way To Go!
အမေ ကနြေျာ့ အသကျတှကွေီးလာပမေဲ့ ကနြော့ နှလုံးသားထဲမှာ အမေ မအိုသေးပါဘူး အမေ.. ။ အမေ ကနြေျာ့ အပျေါမြာ အမကြေ့ေးဇူး ကွီးမားပမေဲ့ ကနြျော ကွအေောငျ မဆကျနိုငျသေးဘူး အမေ……။ အမေ ကနြျောနဲ့ ဒီသံသရာမှာ ဆုံဖွဈပမေဲ့ သံသရာ တဖကျကမျးကို လမျးမပွနိုငျသေးဘူး အမေ .. (ခှငျ့လှတျပေးပါ နျော ) အမေ .. ကနြေျာ့ နှလုံးသားရပျဝနျးမှာ ကွယျစငျတှေ ပတျပတျလညျရှိပမေဲ့ အားလုံးဟာ လမငျး မမေကေို မမှီနိုငျပါဘူး မမေေ.. အမေ အမဂေု့ဏျကြေးဇူးအတှကျ ခိုငျးနှိုငျးစရာတှရှေိပမေဲ့ ပမာပွုပွီး တငျစားရတာ ကနြျော အားမရဘူး အမေ .. အမေ အမမေ့တ်ေတာ အစုနျသာ ရှိတယျ ဆိုပမေဲ့ … More အမေ
4 Comments အမေ
Good Bye 2011 And Happy New Year 2012
နှစ်ဟောင်း ကုန်လို့ နှစ်သစ်ကို ရောက်ရှိတဲ့အခါ လူတိုင်းလို စိတ်တွေထဲမှာ လတ်ဆတ်ခြင်း တွေ အနည်းအများဖြစ်ကြပါတယ် … ထို့အတူ သင်လည်း ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် … ။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် 2011 မှာ ကျနော့်ဘလော့ရဲ့ အမှတ်တရ အဖြစ် ယခုပို့စ်ကို တင်လိုက်တာပါ … ။ ကွန့်မန့် အများဆုံးပေး သူများကိုလည်း ရွေးချယ်ထားပါတယ် ..း) ။ ဒီအောက်က ပုံကတော့ .. 2011 ရဲ့ Annual report အဖြစ် ယခုတင်ထားတဲ့ wordpress ဆိုဒ်မှ Cheer လုပ်ထားတာပါ ။ ဘလော့ပိုင်ရှင်တိုင်း ကိုယ့်ဘလော့ကို လူကြည့်များရင် သဘောကျလေ့ရှိပါတယ် .. ကျနော်လည်း ထို့အတူပါပဲ … More Good Bye 2011 And Happy New Year 2012
6 Comments Good Bye 2011 And Happy New Year 2012
အဖေ အမေကိုသာ အများစု ခေါ်ဝေါ်တာများလို့ တမ်းတတာ များလို့ အဖေဆိုတာရော မတမ်းတဘူးလား ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း မေးမိပါတယ် ။ တကယ်တွေးကြည့်လိုက်ရင်တော့ အဖေဟာလည်း အမေ့လိုပါပဲ ကျနော့်နှလုံးသားမှာ အမြဲ အုပ်ချုပ် ပဲ့ကိုင်ပေးတဲ့ ကျေးဇူးရှင်ပါ။ အဖေ့မှာ ကျနော့အတွက် ငယ်ငယ်ကတိုင် ကျနော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအတွက် ကျနော်နဲ့ သင့်လျှော်မယ်ထင်တာတွေကို သူ ကြိုတင်စဉ်းစားထားပြီးသား တွေးတောထားပြီးသား ။ ငယ်ငယ်ကတိုင် အဖေဟာ ကျနော့အတွက် အားအကိုးရဆုံးသော ပညာရှင်ကြီးပါ ။ ပညာကို သူသိသလောက် ချွင်းချန်ခြင်းမရှိ သင်ပေးတဲ့ ဆရာတစ်ဆူပါ ။ ငယ်ငယ်က သိချင်တာ အရာခပ်သိမ်းအတွက် ခပ်လို့မကုန်နိုင်တဲ့ ရေချိုအိုးကြီးပါ ။ ကျနော်ငယ်ငယ်ကဆိုရင် သိချင်တဲ့ အရာအားလုံးကို အဖေ အဖြေထုတ်ပေးဆဲ ။ အမေနဲ့ … More အဖေ
Leaveacomment အဖေ
အမေသို့ အလွမ်း အမှတ်ရစရာ သတိရမှုများက ခပ်ဝေးဝေး ဝေးနေမှ ပုံပေါ်လာတတ်ကြတာပါ ။ နီးနေတုန်းက သူတို့ လှုပ်ရှားမှု မရှိ ဝေးကွာခါမှ တမ်းတခြင်း ၊ သတိရခြင်းတွေက ထကြွလာကြတာ သဘာဝပဲ လို့ပဲ ထင်မိပါတယ် ။ ငယ်ငယ်ကဆို အမေနဲ့ ပုံပြောတမ်း ကစားခဲ့တာလည်း အမောပါပဲ ။ အမေက အမြဲ သားငယ်-ကျနော် ပြောသမျှ မငြီးညူပဲ နားထောင်ပေးတယ် ။ ထိုစဉ်အချိန် အမေ့မျက်နှာမှာ အပြုံးပီတိနဲ့ ဖုံးလွှမ်းနေတာ ခုထိ ပြန်မြင်ယောင်မိပါတယ် ။ ကျနော်ပျော်လို့ အမေပျော်တယ် ။ အမေအားပေးလို့ ကျနော်ပျော်ခဲ့တယ် ။ အဲ့ဒီအချိန် အမေနဲ့သား တော်တော် သဘောတွေ့ ပျော်မွေ့မိခဲ့တယ် ။ ဟုတ်ပါတယ် ခုထိ … More အမေသို့ အလွမ်း
10 Comments အမေသို့ အလွမ်း
“အမေ” အမေဆိုတဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးကို ကျနော်တို့ စိတ်မှာပဲ. ထင်ထင်.. နှုတ်ကပဲ …ရွတ်ရွတ် အမေ့မျက်နှာက စိတ်မျက်နှာပြင်မှာ ပီပြင်တဲ့ အပြုံးနဲ့ ပေါ်လာစမြဲပါပဲ . ကျနော်တို့ ဘယ်အချိန် ဘယ်ကာလ ဘယ်အသက်အရွယ်ပဲ ရောက်ရောက် အမေဆိုတာ ကျနော်တို့ရင်ခွင်မှာ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိခဲ့ဘူး ဘာလို့လဲဆို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံး အမေ့ကိုပဲ တမ်းတမိတဲ့ လူသားတွေလေ . ကျနော်တို့ အခက်အခဲကြုံတိုင်း တမ်းတမိတာ အမေပဲ ဘာလို့လဲဆိုရင် မဖြစ်နိုင်လွန်းလို့နောက်ဆုံး ရင်ထဲမှာ မှီခိုရာကတော့ အမေ့အရိပ်ဆိုတဲ့ မှီခိုခြင်း ကျောက်တိုင်ဆီကိုပဲ ကျနော်တို့ ချဉ်းကပ်သွားကြစမြဲ ဦးခိုက်စမြဲပါ တစ်ခုခု အမှား လုပ်မိချိန် သို့မဟုတ် ပျက်စီးချိန် သို့မဟုတ် စိတ်ခံစားချက် များ ဖိစီးချိန်မျိုးမှာ ကျနော်တို့ တမ်းတမိတယ် အမေ့ကိုလေ…………. … More အမေ …
5 Comments အမေ …